काठमाडाैंबाट दिक्तेल सारिएको अस्पतालबाट सेवा सुरु
Home जीवन शैली स्वास्थ्य काठमाडाैंबाट दिक्तेल सारिएको अस्पतालबाट सेवा सुरु
खोटाङ, ३ पुस | काठमाडाैंबाट खोटाङ स्थानान्तरण गरिएको फेमिली केयर अस्पतालले नियमित सेवा सुरू गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारणको स्वास्थ्यलाई लक्षित गर्दै सहरबाट गाउँमा सारिएको अस्पतालले दिक्तेलबजारबाट नियमित सेवा सुरु गरेको हो । गत चैतदेखि सेवा प्रवाह सुरु गरेको अस्पतालले कोभिड-१९ को महामारी न्यून हुँदैगएपछि नियमित सेवा प्रवाह सुरु भएकाे अस्पतालका अध्यक्ष डा. केके राईले बताए ।
‘गम्भीर अवस्थाका विरामीलाई तुरुन्तै काठ्माण्डौं पु¥याउन ढिला हुन्छ । बिरामीको बाटैमा ज्यान जान सक्छ, जिल्लामा त्यो अवस्थाका बिरामीलाई तत्काल उपचार गर्ने अस्पतालको खाँचो छ,’ डा. राईले भने, ‘हामीले नाफाका लागि होईन, सेवा दिनका लागि जिल्लामा अस्पताल सारिएको हो । नाफाका लागि काठ्माण्डौंमा रहेको अस्पताल अन्यत्र सार्न आवश्यक थिएन ।’
खोटाङमा स्वास्थ्यमा जटिल किसिमका समस्या देखिए हेलीकोप्टर चार्टर गर्दै अन्यत्र जानुपर्ने अवस्था छ । कतिपय बिरामीको अस्पताल लैजानेक्रममा बाटैमा ज्यान जाने गरेको छ । भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा लिन काठमाडाैं पुग्नुपर्ने बाध्यता अन्त्याका लागि अस्पताललाई दिक्तेलमा सारिएको हो ।
हार्टअट्याक, दम, कडा निमोनिया, एपेन्डिक्स, विभिन्न दुर्घटना, प्रसूति सम्वन्धी समस्याबाट गम्भीर बनेका बिरामीलाई छिटो र छरितो उपचार दिने व्यवस्थाका लागि फेमिली केयर अस्पताललाई गाउँमा स्थानान्तरण गरिएको डा. राईले बताए ।
५० शैयाको स्वीकृति पाएको अस्पतालमा हाल १५ शैयाको इमरजेन्सी वार्ड सञ्चालनमा ल्याइएको छ । हाल अस्पतालमा जनरल फिजिसियन (एमडिजिपी) दुई जना, सर्जन एक जना र डेण्टलका एक जना डाक्टरमार्फत इमरजेन्सी सेवा तथा हाडजोर्नी, प्रसूति, बाल रोग, दाँत लगायतका जनरल सेवा प्रवाह सुरु गरिएको फेमिली हेल्थ केयर इन्टरनेशनल एण्ड रिसर्च सेन्टरले जनाएको छ ।
Previous articleविद्यालयमै पुगेर बालबालिकालाई खाेप लगाइने, महाेत्तरीमा आइपुग्याे माेर्डना खाेप
Next articleपुसभित्र ३० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न अर्थमन्त्रीको निर्देशन